पूर्व युवराज पारश शाह र पूर्व युवराज्ञी हिमानीको सम्बन्ध सुधार, दुईबीच भयो यस्ता कुरा ! – Rastriyapatrika
पूर्व युवराज पारश शाह र पूर्व युवराज्ञी हिमानीको सम्बन्ध सुधार, दुईबीच भयो यस्ता कुरा !
गणतन्त्र स्थापनासँगै तिक्त सम्बन्धबाट गुज्रिएका पूर्व युवराज पारश शाह र पूर्व युवराज्ञी हिमानीबीच सम्बन्ध सुमधुर भएको सन्देश पूर्व राजपरिवारले गोर्खाको पालुङटार पुगेर दिएको छ। लिगलिगकोट त्यही ठाउँ हो, जहाँबाट लमजुङ राज्यका राजकुमार द्रब्य शाहले दौडमा स्थानीय खड्का (मगर) राजाहरुलाई उछिनेर शाह बंशको स्थापना गरेका थिए।
शाह बंशको इतिहासमा निकै महत्वपूर्ण रहेको लिगलिगकोट हाल गोर्खाको पालुङटार नगरपालिकाभित्रै पर्छ र बहिबार हस्तान्तरण गरिएको स्कूल पनि त्यहीँ नजिकै छ।
हस्तान्तरण कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि थिइन्, पूर्व बडामहारानी कोमल। तर, कार्यक्रममा पारश–हिमानी, पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणा शाह र दिलाशा शाहपनि सहभागी भएका थिए।
पूर्व राजपरिवारको मर्यादाक्रमका कारण हिमानी र पारश कोमलको दायाँ–बायाँ बसेका थिए। शाही मर्यादाक्रममा पूर्व राजापछि पूर्व बडामहारानी, त्यसपछि युवराज र युवराज्ञी रहन्थे।
सो कार्यक्रममा सहभागी हुन सासु कोमलका साथ हिमानी बुधबार नै त्यसतर्फ प्रस्थान गरेकी थिइन्। पारश भने बिहिबार फिस्टेल एयरको हेलिकोप्टरबाट बहिनी प्रेरणा र दिलाशा सहित पुगेका थिए। एकै ठाउँमा पुग्न हिमानी र पारशले भिन्दाभिन्दै दिन र भिन्दाभिन्दै मार्ग रोजेकाले उनीहरुबीच अझै सम्बन्ध सुधार भइसकेको रहेनछ भन्ने अनुमान गरिएको थियो।
तर, कार्यक्रम स्थलमा उनीहरुले आफूहरुबीच अब तिक्त सम्बन्ध बाँकी नरहेको सन्देश दिए। हिमानी कार्यक्रमस्थलमा पारशको पछाडि लागेर पुगेकी थिइन्। विद्यालय हस्तान्तरण गरिएपछि पूर्व शाही परिवारले विद्यालय भवनको निरीक्षण गरेको थियो। कोमल सहित पारश–हिमानीले पनि आमालाई पछ्याउँदै निरीक्षण गरे।
‘उहाँहरुबीच राम्रै बोलचाल भएको थियो’, विद्यालयका प्रधानाध्यापक ओजराज गिरिले बिहिबार साँझ नेपालखबरसँग भने, ‘त्यस्तो कटु सम्बन्धको कुनै संकेत त्यहाँ देखिएन।’
हिमानीले विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्रालाई साथमा लिएर विद्यालय भवनको निरीक्षण गरेकी थिइन्। त्यसैक्रममा प्रधानाध्यापक गिरिकै अघिल्तिर पारशले अर्को भवनबारे हिमानीसँग जिज्ञाशा राखेका थिए।
हिमानी नेतृत्वको हिमानी ट्रष्टले जोडो सु बुद्धिष्ट अर्गनाइजेशन (जापान) को आर्थिक सहयोगमा सो विद्यालयका दुई कोठे भवन निर्माण गर्दैछ। हिमानीसँग पारशको जिज्ञाशा यसै विषयमा थियो। ‘अब अर्को भवन कहिले बन्दैछ त’, पारशले हिमानीसँग सोधे। ती बालिकाको हात समातिरहेकी हिमानीले जवाफ दिइन, ‘अर्को भवनपनि छिट्टै बन्छ।’
पारश र हिमानी सार्वजनिक रुपमा यसरी खुलेर प्रस्तुत भएको विगत ५ बर्षयता संभवतः पहिलो पटक हो। थाइल्याण्डबाट फर्केयता लामो समयसम्म पनि पारश–हिमानीबीचको सम्बन्ध सुध्रन सकेको थिएन।
काठमाडौँमा रहँदापनि पारश परिवारभन्दा अलग्गै बस्ने गरेका थिए। तर, केही समययता केही सार्वजनिक कार्यक्रममा भने उनीहरु सँगै देखिएका थिए। तर, बोलचाल गरेको देखिएको थिएन। शाह राजाको इतिहास शुरु भएको लिगलिगकोटबाट पारश–हिमानीले पारिवारिक पुनर्मिलनको सन्देश दिएका छन्।
साभार नेपाल खबर बाट